Kooxda Australia (Melbourne Team) iyo booqashadoodii magaalada Qardho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Kooxda Australia (Melbourne Team) iyo booqashadoodii magaalada Qardho[Sawirro]
QARDHO – Kooxda Kubada Cagta ee ka timid Melbourne, Australia ayaa shalay kulan ciyaar saaxiibtimo la yeeshay kooxda Qardho FC ee ka dhisan xarunta gobalka Karkaar ee Puntland- Soomaaliya.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka timid Australia ayaa horey usoo maray magaalooyinka Muqdisho iyo Bosaaso oo ay kulamo iyo ciyaaro kula soo yeesheen kooxaha heerka kowaad ee ka dhisan magaalooyinkaasi.
Kooxda Melbourne Team oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Bosaaso oo ay kula ciyaareen kooxda Bosaso FC, ciyaartaasi oo ku dhamaatay 2-2 ayaa si weyn loogu so dhaweeyey magaalada Qardho oo ay soo gaareen Arbacadii gelinkii danbe.
Ciyaartii Khamiistii shalay ay la yeesheen kooxda Qardho FC ayaa ahayd mid xiiso badan oo ay kasoo qeyb galeen dadweyne aad u badan ayaa kusoo dhamaatay 1-0 oo ay ku guuleysatay kooxda Qardho.
Melbourne Team oo wakhti fiican la qaatay shacabka iyo waliba dadka ku dhaqan deegaanada ay socodka kusoo mareen ee inta u dhaxeysa Bosaaso iyo Qardho oo ay dhulka soo mareen ayaa lagu wadaa inay u gudbaan magaalada Garowe ee caasimada Puntland halkaasi oo loogu diyaariyey kulamo kale.
Safarka dhalinyaradan ka timid Australia ayaa ah mid loogu talo galay dhiirigelinta dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalata ama ku kortay iyo kuwa ku sugan dalka gudihiisa, waxaana si weyn usoo dhaweeyey socdaalka kooxda dowlada Federaalka iyo Puntland oo ay hada safarka ku marayaan.